Ciidamada Jabuuti iyo Maleeshiyaad Taabacsan DF-ka oo si xun Loogu Jebiyay Dagaal Ka Dhacay Gobolka Hiiraan.
Tuesday November 18, 2014 - 11:48:41 in Wararka by Super Admin
Kadib dagaallo culus oo maanta barqadii ka bilaawday deegaano katirsan gobolka Hiiraan ee bartamaha Soomaaliya ayaa si xun loogu jebiyay maleeshiyaad soomaali ah iyo ciidanka soo duulayaasha Jabuuti.
Wararka ka imaanaya degmada Buula Barde ayaa sheegaya in ciidamo Jabuutiyaan ah iyo maleeshiyaad dabadhilifyo Soomaali ah ay weerar ku qaadeen tuulada Aboorey oo ay gacanta ku hayaan ciidanka mujaahidiinta.
Dagaal culus oo muddo saacada ah kadib ayay ciidamada shabaabul Mujaahidiin ugu suurtagashay in ay dib isaga caabiyaan colka duullaanka soo qaaday.
Wariye Nuur Cali Warsame oo Hiiraan ku sugan ayaa soo sheegay in dagaalkii maanta barqadii bilaawday uu soo gaba gaboobay,ciidanka Jabuuti ayaa dib ugu laabtay degmada Buula Barde oo ay ka duuleen dhimasho iyo dhaawac ayaa larumeysanyahay in cadawga ay kasoo gaareen dagaalkii Abooreey.
Ujeedka ay weerarka u qaadeen maleeshiyaadka Jabuuti ayaa lagu sheegay in ay gacan siiyaan maleeshiyaad beeleed ay hubeeyeen oo mujaahidiintu maalmihii lasoo dhaafay kula dagaalamayeen dhulka Howdka ah ee Aboorey ku dhaw.